Buy Golden City Condo Rent (ID-662) in Yankin on ipivi.com
Golden City Condo is located in Yankin Township. Near to go Yankin Center, Myanmar Plaza and Sedona Hotel. The living area of condo is - 1650 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Store-room, Maid-room,Dinning,Kitchen and Bath-rooms. Fully furnished condo.
Asking Price - 2200 USD (Nego)
ငှားရန်ရှိသော Golden City ကွန်ဒိုမှာ မြန်မာပလာဇာ၊ ဆီတိုးနားဟိုတယ်နှင့် ရန်ကင်းစင်တာများသို့ သွားရောက်ရန်နီးသည့်နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၁၆၅၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ အိမ်အကူနေခန်း၊ စတိုခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များ အသင့်ထည့်သွင်းပါရှိပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၂၂၀၀ (ညှိနှိုင်း)ဖြစ်ပါသည်။
2bedrooms luxury condo For Rent
Name: Golden City Condo Rent (ID-662)